Ndị na - enye FFP2 na ndị na - ahụ maka ihe mkpuchi - China FFP2 Ndị na - eme nkpuchi
Nkpuchi maka anwụrụ ọkụ Ọkụ
Njirimara ： 1.3D mmebe mmadụ dabara adaba ihu, imi nwere ike idozi ya ka ọ ghara ịhapụ ikuku 2.Ndịghị ewepu, enwere ike idogharị ya ihe ugboro asaa 3.Prevent droplets / PM2.5 4.Electrostatic meltblown linen 5.Mapụcha nhicha 6. Ntị nke na-eme ka ahụ ruo gị ala. 1PCS / OPP, 50PCS / BOX, 12BOX / CTN, 600PCS / CTN 5. Ihe ngosi imi plastik na-adịghị ahụ anya, na-agbanwe onwe ya ka ọ dabaa n'ụdị akwa imi dị iche iche, nchebe nchekwa yana mma zuru oke. Ngwa: 1. Ngwa: iji ...
Ihe mkpuchi FFP2
Uru anyị ： 1. Welcom OEM & ODM. 2. Ọnụahịa ụlọ ọrụ, enweghị ọdịiche ọnụahịa etiti. 3. Enwere ike ịchịkwa ịdị mma nke ọma. 4. Ọtụtụ ngwaahịa, ụdị, ụdị, imewe wdg. 5. Ihe ọ bụla ịchọrọ, anyị nwere ike ịchọ gị oge dị mfe. 6. Mara ahịa na ngwaahịa ọ bụla anyị nyere. 7. Ọkachamara ma nwee ahụmihe. 8. "Nzaghachi ngwa ngwa" & ezigbo ọrụ mgbe erere. Ọmụmụ ihe mmepụta ： Nkwakọ ngwaahịa na mbupu m ：gwọ ịkwụ ụgwọ: can nwere ike ịkwụ ụgwọ maka iwu ahụ site na T / T, ...
Atụmatụ ： Uru anyị ： 1. Welcom OEM & ODM. 2. Ọnụahịa ụlọ ọrụ, enweghị ọdịiche ọnụahịa etiti. 3. Enwere ike ịchịkwa ịdị mma nke ọma. 4. Ọtụtụ ngwaahịa, ụdị, ụdị, imewe wdg. 5. Ihe ọ bụla ịchọrọ, anyị nwere ike ịchọ gị oge dị mfe. 6. Mara ahịa na ngwaahịa ọ bụla anyị nyere. 7. Ọkachamara ma nwee ahụmihe. 8. "Nzaghachi ngwa ngwa" & ezigbo ọrụ mgbe erere. Ọmụmụ ihe mmepụta ： Nkwakọ ngwaahịa & Mbupu ： 1. FedEx / DHL / UPS / TNT maka nlele, Doo ...
Uru anyị ： 1. Welcom OEM & ODM. 2. Ọnụahịa ụlọ ọrụ, enweghị ọdịiche ọnụahịa etiti. 3. Enwere ike ịchịkwa ịdị mma nke ọma. 4. Ọtụtụ ngwaahịa, ụdị, ụdị, imewe wdg. 5. Ihe ọ bụla ịchọrọ, anyị nwere ike ịchọ gị oge dị mfe. 6. Mara ahịa na ngwaahịa ọ bụla anyị nyere. 7. Ọkachamara ma nwee ahụmihe. 8. "Nzaghachi ngwa ngwa" & ezigbo ọrụ mgbe erere. Ọmụmụ ihe mmepụta ： Nkwakọ ngwaahịa na mbupu ： 1. FedEx / DHL / UPS / TNT maka nlele, Dolọ na-2. 2.
Uru anyị ： 1. Welcom OEM & ODM. 2. Ọnụahịa ụlọ ọrụ, enweghị ọdịiche ọnụahịa etiti. 3. Enwere ike ịchịkwa ịdị mma nke ọma. 4. Ọtụtụ ngwaahịa, ụdị, ụdị, imewe wdg. 5. Ihe ọ bụla ịchọrọ, anyị nwere ike ịchọ gị oge dị mfe. 6. Mara ahịa na ngwaahịa ọ bụla anyị nyere. 7. Ọkachamara ma nwee ahụmihe. 8. "Nzaghachi ngwa ngwa" & ezigbo ọrụ mgbe erere. Nkwakọ ngwaahịa & Mbupu m ：kwụ ：kwụ :gwọ: can nwere ike ịkwụ ụgwọ maka iwu ahụ site na T / T, Ali Trade Assirm, Wes ...
Njirimara ： 1.3D mmebe mmadụ dabara adaba ihu, imi nwere ike idozi ya ka ọ ghara ịhapụ ikuku 2.Ndịghị ewepu, enwere ike idogharị ya ihe ugboro asaa 3.Prevent droplets / PM2.5 4.Electrostatic meltblown linen 5.Mapụcha nhicha 6. Ntị nke na-eme ka ahụ ruo gị ala. 1PCS / OPP, 50PCS / BOX, 12BOX / CTN, 600PCS / CTN Ngwa: 1. Ngwa: ojiji maka ihe owuwu, Ngwuputa Eke, akwa, akwa ogwu. 2. Ngwa: ndụ ụbọchị, ụlọ ọrụ mmepụta ihe, SPAs, ụlọ ọgwụ, ụlọ ọgwụ…
Njirimara workshop Mmemme Production ： Nkwakọ ngwaahịa na Mbupu ： 1. FedEx / DHL / UPS / TNT maka ndị nlele, orlọ-n'ụlọ Ọdụ ụgbọ elu / Port na-enweta 3. Ndị ahịa na-akọwapụta ndị na-ere ahịa ma ọ bụ ụzọ mbupu ahia maka mkparịta ụka 4. Oge nnyefe: -7bọchị 3-7 maka ihe nlele; 5-25 ụbọchị maka ngwongwo ngwakọ. 5. Oge nnyefe nlele: ụbọchị 3-5 site na DHL / UPS / TNT / FEDEX kwupụta 6. Oge nnukwu Mbupu: Oge ọrụ ụbọchị site na Express / ụbọchị 15-30 site na ngwugwu mmiri: Ọ dabere. Nabata nhazi ...